TENAA na -ebipụta ihe onyonyo a sụgharịrị nke Red Magic 5G nke Nubia | Androidsis
TENAA na-ebipụta onyonyo a sụgharịrị nke Red Magic 5G nke Nubia
El Nubia Red Ime Anwansi 5G ọ ka na -apụta na mgbasa ozi dị iche iche tupu ewepụta ya. Oge a ọ bụ nchekwa data TENAA ebe ọ nọ na nke ya foto ọhụrụ atụgharịrị, iji gosi nkọwa dị iche iche nke ịka mma ya.
Otu asambodo ndị China ewepụtala ya n'ihu ya, n'azụ ya na akụkụ ya, yabụ na onweghị ihe fọdụụrụ anyị n'echiche. Ka anyị cheta na ndepụta njiri mara na nkọwapụta nke ọdụ ụgbọ elu a pụtara na nke mbụ na TENAA ihe dị ka otu izu gara aga, n'agbanyeghị na ejighị ihe anya, nke bụ nke ejikọtara ya ugbu a.
Ndepụta mbụ TENAA na Nubia's Red Magic 5G kwuru nke ahụ Ngwaọrụ na-abịa na ihuenyo 6.65-inch OLED, nke na -emepụta mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080. Na mgbakwunye, ọ kọwara nke ọma na batrị nke a ga-enye ihe dị elu nwere ikike nke 4,400 mAh na Teknụzụ chaja ngwa ngwa nke 55 watt; nke a na -atụ anya na ọ ga -abia site na nkwado maka teknụzụ chaja ngwa ngwa. Ọhụrụ onyonyo ọ na -agbakwunye bụ nke anyị kokwasịrị n'okpuru.
N'aka nke ọzọ, anyị ma nke ahụ Ngosipụta ga -anya isi ume ọhụrụ 144Hz, nke kachasị elu na ụlọ ọrụ ama. Njirimara a ga -eme ka ọ dị mma maka ịgba ọsọ egwuregwu nwere okpokolo agba dị elu kwa sekọnd (fps). Nke a na -akwado nke a 865d Snapdragon na 5G nke a ga -edobe n'okpuru mkpuchi nwere sistemụ jụrụ oyi dị mma nke ga -ahụ na a na -ezere oke ikpo ọkụ na ụfọdụ ọghọm ndị ọzọ nke ekwentị mkpanaaka na -ata n'ahịa.
La LPDDR5 Ram na Nubia Red Magic 5G ga -enwe bụ ihe ruru 16 GB, ebe nchekwa dị n'ime ga -adị ruo 256 GB. Igwefoto n'azụ ya bụ 64 MP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » TENAA na-ebipụta onyonyo a sụgharịrị nke Red Magic 5G nke Nubia
Black Desert Mobile na-enweta Ascension Klas
Ekwenyela Vivo Z6 5G iji nweta nkwado Snapdragon 765 na 5G abụọ